होमस्टे आउने प्रत्येक पाहुनालाई उपहार
आजको न्युज शुक्रबार, ३१ साउन २०७६
बर्दियाको डल्ला गाउँको होमस्टे (घरबास) मा बसेर फर्कदा पाहुना उपहार लिएरै फर्कने गरेका छन् ।
होमस्टेमा बसेवापत होमस्टे सञ्चालकले पाहुनाको सम्मानस्वरुप मायाको चिनोको रुपमा हस्तकला विभिन्न सामान प्रदान गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय थारु समुदायको लोक संस्कृति, रहनसहनको जगेर्ना गर्दै आयआर्जनको विकल्पको रुपमा मधुवन नगरपालिकाले यहाँ १० वटा घरबास निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको छ । पर्यटकलाई लोभ्याउने उद्देश्यको थारु परिकारका खानाको स्वाद चाख्न, थारु नाच हेर्न यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण केसीले बताए । हेर्न पाइन्ने थारु सरसफाइयुक्त आफ्नै घरको अनुभव हुने घरबास छ ।
यहाँ आउने पर्यटकले थारु समुदायले निर्माण गरेका हस्तकलाका सामान किनेर लैजान थालेपछि स्थानीय समुदायमा ढकिया, छिट्नी, मुडा, कुर्ची, बनाउन आकर्षण बढेको छ । होमस्टे सञ्चालक समीतिका अध्यक्ष तथा संयोजक पर्शुराम चौधरीको अनुसार पर्यटन आगमनले स्थानीय बासिन्दामा आयआर्जन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बाह्रै महिना पर्यटकका लागि आवतजावत गर्ने सबै आधार तय हुँदै गएको छ । पर्यटक, कृषि उत्पादन र पर्यटक घुम्नका लागि सम्पदा निर्माण गरिएकाले वर्षेनी यहाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको चौधरीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, ३१ साउन २०७६
प्रचण्डले उद्घाटन गरे चितवनकाे अम्ब्रेला स्ट्रिट
हिमालय एयरद्वारा चीनका तीन सहरको उडान स्थगित
चिडियाखाना घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ ? घरबाटै टिकट बुक गर्न सकिन्छ
कठ्यांग्रिने चिसाेमा हिउँकाे सुन्दरता ! (फाेटाे फिचर)